Maxay tahay sababta ay hoggaamiyayaasha Afrika dibedda ugu aadaan caafimaad? - BBC News Somali
Image caption Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa London u tagayay daaweyn caafimaad tan iyo bishii May
Madaxwaynayaasha Nigeria, Angola, Zimbabwe, Benin iyo Algeria ayaan dhammaantood kalsooni ku qabin adeegayada caafimaad ee wadamooda. Waxayna wakhti badan ku bixayaan wadamada dibada si ay isu daaweeyaan.
Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in tusaale ahaan dalka Zimbabwe in isbitaalada ay dawladdu maamusho iyo goobaha kale ee caafimaad ay gabaabsi ku tahay dawooyinka sida kuwa loo cuno xanuun baab'inta. Waxaana aad u hooseeya adeegyada ay shacabku ka helaan goobahaas.
Image caption Isbitaalada dowladda Nigeria waxaa loo arkaa inaysan bixin adeeg caafimaad oo aad u sarreeya
19 January: Wuxuu u safray UK " isaga oo qaatay fasax caafimaad"
6 June: Xaaskiisa Caa'isha ayaa sheegtay in caafimaadkiisu soo fiicnaaday
Buhari oo maanta dib ugu laabtay xafiiskiisa
Dalka Benin ayaa waxaa xilka madaxtinimo haya nin da' ahaan ka yar madaxda kale waxaana uu dhankiisa safar u aaday Faransiiska bishii June. iyadoona lagu sameeyey laba qalliin oo kala duwan. Mid kamid ah ayaa looga qalaykansarka ku dhaca taranka ragga halka mid kalena uu ahaa habdhiska dheef shiidka
Image caption Madaxweynaha dalka Aljeria Cabdelacasiis Bouteflika ayaa xaniusaday sanaddii 2013
Image caption Afhayeenka Robert Mugabi ayaa horay u sheegay in madaxweynuhu uusan hurdin balse uu indhihiisu nasinayo
Image caption Madaxweynaha Angola Jose Eduardo Dos Santos ayaa la eedeeyay markii uu dhowr jeer dibadda u raadsaday daaweyn caafimaad